ရရှိနိုင်ပါသည် KDE 12.10 နှင့်အတူ Kubuntu 4.9 | Linux မှ
KDE 12.10 ဖြင့် Kubuntu 4.9 ရရှိနိုင်သည်
အတူတကွယုတ္တိသည်အတိုင်း စတင်ခြင်း Ubuntu ကို 12.10, ဒီဖြန့်ဖြူးဘို့တည်ရှိသောမူကွဲ၏ကျန်များ၏ရလဒ်များကိုလည်းဆက်ပြောသည်နေကြသည်။
၏ဖြစ်ရပ်အတွက် Kubuntu ၁၉.၁၀, ဒီလွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူကြွလာ KDE ၄.၉ Desktop Environment ပါရှိသည့်အားသာချက်များ၊ မိဘဖြန့်ဝေသည်ကဲ့သို့ Kubuntu 1GB ပတ် ၀ န်းကျင်ပါ ၀ င်သည့် DVD ကိုကမ်းလှမ်းသည့် Alternative CD များကိုဖယ်ရှားသည်။
1 ပုံမှန်အားဖြင့် applications များ။
ပုံမှန်အားဖြင့် applications များ။
Calligra ပုံမှန်အားဖြင့် Office Suite ဖြစ်လာသည်။
KDE Telepathy ၀.၅ အစားထိုးသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုလိုင်း Kopeteဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ ဂူဂဲလ်၊ Yahoo နှင့်အခြားလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး protocol များအလွယ်တကူရယူနိုင်သည်။
LightDM ယခု QML-based themes များနှင့်အစားထိုးအသုံးပြုသည် KDM.
ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် applications များ ကျောက်တံတား စကင်နာများနှင့်စီမံခန့်ခွဲရန် ကာမိုဆို ဝက်ဘ်ကင်မရာကိုစီမံရန်။ တက်ဘလက်များကိုပြုပြင်ရန်ကိရိယာတစ်ခုကိုထည့်သွင်းခဲ့သည် Wacomသက်သေအထောက်အထားလိုအပ်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့်မည်သည့်တုံ့ပြန်ချက်ကိုမှကောင်းစွာလက်ခံလိမ့်မည်
အခြား tool အသစ်တစ်ခုသည် printers များအားပိုမိုလွယ်ကူစွာစီမံခန့်ခွဲရန်တာဝန်ရှိသည်။ ၎င်းကို panel မှ applet မှကျွန်ုပ်တို့ရယူနိုင်သည်။
ဒီဗားရှင်းတွင်အခြားတိုးတက်မှုများကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည် OwnCloud, Gtk application များအတွက်အသွင်အပြင် Configuration Manager နှင့် Kontact အရာယခု Facebook နှင့် Google နှင့်အတူပေါင်းစည်းရှိပါတယ်။ သို့သော် Ubuntu နှင့်၎င်းမှဆင်းသက်လာသောအရာများသည်ပုံမှန်မဟုတ်သကဲ့သို့ဖြန့်ချိမည့်နောက်ဆုံးရက်ကိုရောက်ရှိရန်အတွက်ဤဗားရှင်းကိုပြproblemsနာအချို့နှင့်ပို့ဆောင်ပေးသည်။
များစွာသောအခန်းကန့်များကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သောအခါ partition manager သည်ချိတ်ဆွဲထားသည်။
Krita တွင် "Settings" Configure Krita ကိုဖွင့်သောအခါပြproblemsနာရှိသည်။
pane ထဲက 'Page one' ကိုနှိပ်ပြီးပလာစမာ - နက်ဘွတ်ခ်သည်အေးခဲသွားသည်။
Desktop Effects များသည် Table9ကို အသုံးပြု၍ နှေးကွေးပြီးအကျင့်ပျက်ပြားသည်။
Kubuntu 12.10 (PC / Netbooks / Laptop) Kubuntu 12.10 (တက်ဘလက်များ)
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: Kubuntu ဘလော့ဂ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » KDE 12.10 ဖြင့် Kubuntu 4.9 ရရှိနိုင်သည်
ငါသူတို့မှာ Canonical နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့နာမည်ပြောင်းတော့မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်
«© 2010- The Kubuntu အသိုင်းအဝိုင်း။ အောက်စီဂျင်အိုင်ကွန်ဆောင်ပုဒ်၏မူပိုင်ခွင့်အိုင်ကွန်များ
Kubuntu နှင့် Canonical သည် Canonical Ltd. ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်»
ငါ kde မကြိုက်ဘူး၊ ငါ kubuntu ကိုမကြိုက်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကjobရာမအလုပ်လုပ်ခဲ့တာကိုသင်ဝန်ခံရမယ်
ငါ KDE ကိုနှစ်သက်တယ်တကယ်တော့ငါ့ရဲ့ desktop ပေါ်မှာ Kubuntu 12.04 ကိုအသုံးပြုပြီး desktop ပေါ်မှာငါ pardus 2011.2 ခံနိုင်ရည်ကိုအသုံးပြုသည် Laptop ကိုအသုံးပြုသည်။ တကယ်တော့ KDE သည်ကျွန်ုပ်၏ desktop ပေါ်တွင်အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်သည်။
အခြားခေါင်းစဉ်တစ်ခုသို့သွားသောအခါ kubuntu လူများသည် calligra ကို libreoffice ဖြင့်အစားထိုးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုဖတ်ခဲ့ပုံရသည်။ ငါတစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းကိုကြိုးစားပြီးသည်နှင့်၎င်းသည်ရုံးခန်းကောင်းတစ်ခုဟုထင်ရသည်။
ဒီအပြောင်းအလဲတွေဘာတွေယူဆောင်လာသလဲကြည့်ရအောင်။ OpenSUSE နှင့် Chakra တို့နှင့်အတူအကောင်းဆုံး KDE တစ်ခုနှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသောအကန့်အသတ်တစ်ခုအတွက် Kubuntu မှယောက်ျားများအားချီးကျူးဂုဏ်ပြုသည်။
လုံးဝသဘောတူသည်။ Kde သည်အပြည့်စုံဆုံး၊ ကြော့ရှင်းပြီးစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သော Desktop များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
KDE နည်းဥပဒေများ ^ ___ ^
မင်္ဂလာပါ fercho !! ငါ kubuntu 12.10 ကိုစမ်းသပ်နေပြီး default office suite သည် libreoffice ဖြစ်ပြီး calligra မဟုတ်ပါ။
အိုကြည့်ပါ၊ ဘယ်လောက်ထူးဆန်းလိုက်သလဲ၊ kubuntu စာမျက်နှာတွင်သူတို့ libreoffice အစား calligra ကိုပုံမှန်အတိုင်းထားတော့မည်ဟုငါပြောခဲ့သည်။ ငါမြင်သည့်အတိုင်းငါကဲ့သို့သော ubuntu icon ကိုငါကဲ့သို့ kubuntu အစားရရှိသည်၊ ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အပေါ်ရှိသည်။ kubuntu 12.04 ။
ကောင်းပြီ၊ Kubuntu 12.10 developer များကိုယ်တိုင်ကကျွန်ုပ်ကိုလှည့်စားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်မှားသွားမိခြင်းဖြစ်သည် ... သတိပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါ့အတွက်တော့ဒါဟာ OS အားလုံးရဲ့အကောင်းဆုံး desktop ဖြစ်ပြီးငါ Calligra ကိုမကြိုက်ဘူး၊ ငါဟာ LibreOffice ကိုသုံးနေတုန်းပဲ။ အခုအချိန်မှာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက formats အားလုံးကို support လုပ်တယ်။ Calligra မှာ option တစ်ခုပဲရှိတယ်။
မင်္ဂလာပါ elav !! တရားဝင် kubuntu ဖိုရမ်များတွင် calligra အကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့ဖူးသည်။ နောက်ဆုံးအချိန်၌သူတို့စိတ်ပြောင်းသွားသည်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်လာလိမ့်မည်။ သို့သော်မကြာသေးမီအချိန်အထိသူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့် calligra ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဒီတော့သူတို့ LightDM ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့အတွက် KDM ကိုဘယ်လိုရှင်းပြမလဲ။ အခုအသစ်တင်လိုက်တာနဲ့ login themes တွေကငါ့ကိုသတ်လိုက်တာပဲ။
ငါ KDM နဲ့ shit ကိုပြန် install မလုပ်ခင်သဲလွန်စပေးမယ်ဆိုရင်ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :)
ငါထင်တာကတော့ Ubuntu နဲ့အံဝင်ခွင်ကျလုပ်ဖို့သူတို့လုပ်ခဲ့တယ်၊ ဒီနေ့ LDM မှာဖောင်းပွမှုအများကြီးရှိတယ်။
Ubuntu LTS ကိုသုံးနေတုန်း Kubuntu 12.10 ကိုစမ်းသပ်ဖို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ပြောင်းလဲရတာမထူးဆန်းဘူး၊ ဒီထရိုပိုစ့်ကကျွန်တော်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Ubuntu 12.10 ကို install မလုပ်ပါနှင့်။ virtual machine တစ်ခုဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။ ရိုးသားစွာ၎င်းသည်အလွန်နှေးကွေးသောကြောင့်၎င်းသည် LTS မဟုတ်သောဗားရှင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်လာမည့်ဖြစ်သော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်၎င်းသည် Ubuntu ၏သမိုင်းတွင်အနှေးဆုံးဖြစ်သည်။ ငါချစ်သော kubuntu 12.04 နှင့်အတူနေဆဲ
သင်ကနှေးကွေးတယ်လို့ထင်ပါသလား ငါမကြာသေးမီကဗားရှင်း ၁၂.၀၄ မှ ၁၂.၁၀ သို့ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Kubuntu 12.04 တွင်ရှိသည်။ အမှန်တရားသည်၎င်းသည်ရိုးသားစွာပိုမိုမြန်ဆန်သည်ဟုငါထင်မြင်သည်။ ၎င်းသည် KDE version 12.10 တွင်တိုးတက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရမည်
ဆိုလိုတာကတော့ငါချစ်သောသူ၊ စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် ubuntu ဆိုတာ kubuntu သည်နတ်ဘုရားများကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စူးရှသောဗားရှင်းကိုကုသနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ kubuntu 12.04 ကို install မလုပ်၊
ငါ download လုပ်တော့မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ kubuntu က Ubuntu ကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့အတွက် ၁၂.၁၀ မှာစည်းလုံးမှုကအရမ်းနှေးတယ်၊
အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်သည် KDE အသုံးပြုသူမဟုတ်ပေမယ့်အခြားကွန်ပျူတာများနှင့်အတူအိမ်မှာရှိနှင့်ပြီးသားအမှန်တရားကတော့ဒီဗားရှင်းမှာအဆင်ပြေပါတယ်။ ငါ KDE ရဲ့အရည်အသွေးအတွေးအခေါ်နောက်ကိုလိုက်ရုံသာမကအခြားသောစပွန်ဆာနှင့်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပိုမိုရင်းနှီးမှုရှိခြင်းသည်အနည်းငယ်ပိုအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် Chakra နဲ့ openSUSE နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း (အနည်းဆုံးသတ္တုတွင်း) ကိုအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလို့ထင်ရင်။ Kubuntu မှလာမည့်ဖြန့်ချိမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများသည်၎င်းတို့ရပ်ကွက်သည်ကြီးမားပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့်၎င်းကို ပိုမို၍ ပြုလုပ်ရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် KDE ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအမြတ်ထုတ်ရန်အတွက်၎င်းတို့သည်ပိုမိုအရောင်တင်သောထုတ်ကုန်နှင့်ထိုက်တန်သည်ဟုငါထင်သည်။
၎င်းသည် Kubuntu ၏ဘ ၀ တစ်ခုလုံး၏သမိုင်းဖြစ်သည်၊ အလေးချိန်မပြည့်မီသော 10ctvs သာရှိသည်။ Kubuntu ၏မူကွဲအသစ်တိုင်းတွင်တစ်ဝက်ခန့်ပြန့်ကျဲနေသောလေကဲ့သို့၎င်းတွင်ပတ်ပတ်လည်ရှိရန်လိုအပ်သည်။
မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်က (၉.၀၀) မှာတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့အတိုင်းပဲ (ငါအရင်က Ubuntu နဲ့ Debian က Kubuntu ကိုပြောင်းခဲ့တုန်းက)၊ ငါဟာ ၉.၁၀ အထိခံနိုင်ရည်ရှိခဲ့ပြီး KDE ဟာတကယ်ဆိုးတာလားဒါမှမဟုတ် Kubuntu လားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်။ သာမန်
ငါ distro အပြင်အပြောင်းအလဲဖြစ်ကတည်းကငါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုလေ့လာချင်တယ်၊ အဲဒါကို apt-get နဲ့အတူအရာအားလုံးကိုမချိုးဖောက်ဘဲလေ့လာပြီးလေ့လာချင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါမှာရွေးစရာနှစ်ခုရှိတယ်။ Gentoo or Arch ။
ဒီ distros နှစ်ခုဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပေမယ့် Arch ISO ကိုပထမဆုံးဒေါင်းလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ နောက်ပြန်မလှည့်ဘူး - Gentoo နဲ့ပရောပရည်လုပ်ခြင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်🙂
KDE SC ကို Arch တွင်အသုံးပြုပြီးနောက်အခြား distro များတွင် KDE ကိုအသုံးပြုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ Sabayon မှလွဲ၍ Arch KDE မှ LXDE ကဲ့သို့အလင်းကိုခံစားရသည်၊ ပျံသန်းနေစဉ်၊ openSUSE, Chakra (Arch မဟုတ်သော)၊ သို့မဟုတ် Kubuntu he တို့ကဲ့သို့သောအလင်းရောင်များခံစားရလိမ့်မည်။ သူ့ကိုယ်သူဆွဲငင်; Arch တွင် KDE ဗားရှင်းအသစ်ကိုထုတ်ပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်တွင်များသောအားဖြင့် Fedora တွင် KDE အဟောင်း (နှင့်စည်သွတ်ယိုစိမ့်ခြင်း၏ claustrophobic ပြissueနာလည်းရှိသည်) ဖြစ်သော်လည်းအဆင်ပြေပါသည်။
အမှန်တရားမှာ kubuntu ဗားရှင်းတွင် developer များပြုလုပ်ခဲ့သည့်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး kde 4.9 သည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ distro တွင်အသေးစိတ်အနည်းငယ်ကိုပြင်ဆင်ရန်မရှိသော်လည်းအထွေထွေလိုင်းများသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအလွန်ကောင်းသည်။
Kubuntu သည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အလုပ်လုပ်သည်၊ အကယ်၍ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်လျှင်၊ သက်ရောက်မှုများကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
သင်သည်အဘယ်သို့သော optimization အကြောင်းပြောနေတာ, သူတို့ကိုမျှဝေနိုင်မလား?
(အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများကိုပိတ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းသည်မရေတွက်ပါ။ ) 😉
ငါဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါပြောမယ်၊ ငါဟာအသက် ၇၀ အရွယ်ဝါရင့်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ ဒီအသက်အရွယ်မှာတောင်သင်ယူရတာကိုကြိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ငါအရမ်းကောင်းတယ်။ လွန်ခဲ့သောအချိန်ကကျွန်ုပ်အငြိမ်းစားယူသောအခါ၌၎င်းသည်ပုံမှန်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်ရန် ၀ င်းဒိုးနှင့်အတူလာသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ပရိုဂရမ်များဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းပြcontinuousနာသည်အမြဲတမ်းပြagoနာတစ်ခုဖြစ်သည် Ubuntu ကိုအသုံးမပြုတော့တာဟာအလွန်ကောင်းတဲ့အချိန်ပဲ။ ထိုအခါငါ kubuntu ကို download လုပ်ပြီး၎င်းကိုငါ့အချိန်တိုတိုနဲ့ထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
Ubuntu သည် Windows အတွက်အသစ်စက်စက်သုံးစွဲသူများနှင့်အသစ်ရောက်ရှိလာသောသူများအတွက်အထူးအကြံပြုချက်မဟုတ်သော (အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်သည်မသိသော Unity အတွက်) ဖြစ်သော်လည်း Kubuntu ကအကြံပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း KDE ပတ်ဝန်းကျင်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး Kubuntu တွင်အလွန်ကောင်းသော application များရှိသည်။ 😀
မေးခွန်းတစ်ခု - ၁၂.၀၄ LTS ဗားရှင်းကိုကျွန်တော်မတွေ့ရသေးသော kubuntu မဟုတ်သောတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်သင်၌၎င်းကိုကူးယူရန်လင့်ခ်တစ်ခုရှိသလား။
ရရှိနိုင်သော Nemo 1.0.4 နှင့်သစ်ကြံပိုး 1.6.2
Ubuntu 13.04 သည်နာမည်တစ်ခုရှိပြီးဖြစ်ပြီးမကြာမီတွင် Quantal Quetzal ကိုရရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။